के प्रचण्डलाई विराटनगरमा जुत्ता प्रहार भएको हो? - Nepal Factcheck
के प्रचण्डलाई विराटनगरमा जुत्ता प्रहार भएको हो?
अलग अलग समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका नेताहरुले देशभर अलग अलग सभाहरु गर्दैछन्। यही क्रममा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको समूहले जनवरी २९, शुक्रबार विराटनगरमा सभाको आयोजना गरेको थियो। सो सभामा प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार गरिएको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा फोटोसहित दावी गरिएका छन्। यो विषयमा हामीले तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) गरेका छौँ।
त्यसैगरी फेसबुकमा साढे १६ लाखभन्दा बढी फलोअर रहेको फेसबुक ग्रुप “Maya माया” मा यही फोटोसहित ‘प्रचण्डमाथि विराटनगरमा जुत्ता प्रहार भएको’ दावी शनिबार दिउँसो १ बजेर १३ मिनेटमा राखिएको छ। यो पोस्टलाई आइतबार दिउँसोसम्ममा ६६८ पटक सेयर गरिएको छ भने २ हजार कमेन्ट छन्। त्यसैगरी १३ हजारभन्दा बढी रियाक्सन छन्। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क
जुत्ता प्रहार भएको हो?
हामीले विराटनगरमा रहेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार अनन्तराज न्यौपानेलाई सोध्यौँ। उक्त सभामा अगाडिको पंक्तिमै रहेर समाचार संकलन गरेको बताउने न्यौपानले भने, ‘मैले त देखिनँ। मलाई लाग्छ जुत्ता प्रहार गरेको होइन। यो असत्य हो।’
त्यसैगरी हामीले कुनै पनि छापा वा अनलाइन मिडियामा विराटनगरमा जुत्ता प्रहार भएको समाचार भेटेनौँ।
दावी : प्रचण्डलाई विराटनगरमा जुत्ता प्रहार गरियो।
तथ्य जाँच : मिथ्या समाचार । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको फोटो भएकै भिडियोमा प्रचण्ड मञ्चबाट ओर्लँदै गरेको र जुत्ता प्रहार भएको देखिन्न। कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारको भनाई, प्रहरी अधिकारीको भनाई र कुनै पनि विश्वासिला मिडियामा यो सम्बन्धी समाचार नभेटिएर फेसबुक ग्रुप र पेजहरु र ट्विटरमा मात्रै भेटिनु र त्योसँगै भिडियो नरहनुले पनि यो समाचार गलत रहेको देखिन्छ।